Bauxite waa dhagaxa miisaska leh aluminium aad u sarreeya - fiidiyow
Ka iibso maqaayad dabiici ah dukaankeena
Bauxite waa dhagaxa miisaska leh ee leh aluminium aad u sarreeya. Waa isha adduunka ugu weyn ee aluminiumka iyo xameetida. Bauxite wuxuu inta badan ka kooban yahay aluminium aluminium ah, boehmite iyo qurbaha, oo lagu qaso labada birood ee ah 'goidesite iron' iyo hematite, kaolinite aluminium dhoobada aluminiumka iyo qaddarka yar ee anatase iyo ilmenite.
Qorshayaal badan oo kala-saaritaan ayaa loo soo jeediyay bauxite.
Vadász (1951) waxaa lagu kala soocay kaart bauxite ores (carbonate):
Xirmooyinka kaarboon-ka-karbaash ayaa inta badan ka dhaca Yurub, Guyana, iyo Jamaica oo ka sarreeya dhagxaanta kaarboon (dhagax-dheere iyo dolomite), halkaas oo laga sameeyay cimilada dambe iyo isu-uruurinta lakabyada dhoobada isku-dhafan - kala-firidhsan oo kala-firidhsanaa markii qaddarradu xirmooyinka si tartiib tartiib ah ugu kala milmeen inta lagu jiro cimilada kiimikada. .
Dhagaxyada dambe ayaa inta badan laga helaa wadamada kulaylaha. Waxay u samaysmeen iyada oo ay ku dheehantahay dhagaxaan badan oo silsilado ah sida 'granite', gneiss, basalt, syenite, iyo shale. Marka la barbar dhigo sunta hodanka ku ah birta, samaynta dhagaxyadan waxay kuxirantahay xitaa cimilo aad u ba'an oo ku yaal meel leh bullaacad aad u wanaagsan. Tani waxay awood u siisaa kala-goynta kaolinite iyo roobka gib Website-ka. Aagagga leh aluminiumka ugu sarreeya ayaa had iyo jeer ku yaal meel ka hooseysa lakab sare oo saliid leh. Aluminium aluminium-ku-keydka qashin-qubka ee aakhirkii waa gebi ahaanba gib Website.
Arrinta Jamaica, falanqayntii ugu dambaysay ee carradu waxay muujisay heerar sare oo cadmium ah, taasoo soo jeedineysa in bauxite-ka uu ka yimid ashkate Miocene dhowaan ka soo dhacay dhacdooyin muhiim ah oo kuleylka ku nool badhtamaha Ameerika.
Australia waa soosaaraha ugu weyn ee bauxite, waxaa ku xiga Shiinaha. Sanadkii 2017, Shiinaha ayaa ahaa soosaaraha ugu sarreeya aluminiumka leh nus ka mid ah wax soo saarka adduunka, waxaa ku xigay Russia, Canada, iyo India. In kasta oo baahida aluminium ay si dhakhso leh u kordhayso, kaydka loo yaqaan ee dhagaxa dhagxaanta ayaa ku filan inay buuxiyaan baahiyaha adduunka ee aluminium qarniyo badan. Dib u warshadaynta aluminiumka, oo leh faa iidada hoos udhaca qiimaha korantada ee soo saarista aluminium, ayaa si weyn u kordhin doonta kaydka adduunka.
Dhagxaanta loo yaqaan 'Bauxite Stone' waxaa loo adeegsan karaa ka-fiirsashada, taasna waxay ku caawin kartaa inay kaa caawiso sidii aad ku heli lahayd jawaabaha xaaladaha adiga kugu saabsan
Waxay kaloo kuu oggolaaneysaa inaad ogaato ulajeedka dadka kale. Waxaa la ogyahay inay gacan ka gaysato abuuritaanka kororka dareenka farxadda iyo wanaagsanaanta wanaag.
Si dhakhso ah uma shaqeeyo laakiin haddii lagu hayo agagaarkaaga, tamarkeedu wuxuu ku shaqeeyaa inuu kugu kiciya waqti ka dib.
Adiga oo kaa caawinaya sii deynta arrimaha qiirada leh ee kaa horjoogsanaya inaad gaarto waxa aad jeceshahay, waxay kaa caawin kartaa inaad siidaysid dareenka ku sababi kara inaad xanaaq dareento ama xanaaq ka muujiso duruufaha noloshaada.
Bauxite, wuxuu ka yimid Australia